ဦးသာအေး “သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတ အိုဘားမားက ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောကြားခဲ့သည်” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« U Thein Sein, Daw Suu and good Generals of Myanmar Tatmadaw must stop our beloved country from going to the dogs
လူစိတ်ကင်းမဲ့တဖက်ကန်းတဲ့ ဒီပြည်သူနဲ့ဒီ ခေါင်ဆောင်လ်ုက်လည်းလိုက်ပါပေတယ်ဗျာ »
NDPD ပါတီမှာ နိုင်ငံရေးရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သုတေသနမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးသာအေးက သမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံ စကားပြောခွင့်ရချိန်မှာ အဓိကအချက် ၃ ချက်ကို ရိုဟင်ဂျာတွေ အတွက် ကိုယ်စားပြုပြောကြားခဲ့တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာနာမည်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မွေးရာပါနိုင်ငံသားပေးဖို့၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကို ချက်ချင်းလက်ငင်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့၊ လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့တွေ (ရိုဟင်ဂျာတွေထံ) ရောက်ရှိဖို့ ဆိုတဲ့ အဓိကအချက်တွေကို အိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ဦးသာအေးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတတစ်ဦးရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ နိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့လည်း ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် ဦးသာအေးက သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးသာအေးရဲ့ ပြောကြားချက် အပြည့်အစုံကို ဗွီဒီယိုဖိုင်မှာ ဆက်လက်နားဆင်နိင်ပါတယ်။
Tags: Buddhism, Burma, Democratic, Muslim, Rakhine people, Rohingya people
This entry was posted on December 1, 2012 at 3:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.